बालकृष्ण ढुंगेलले प्रचण्डलाई जेल बाट लेखे ! के प्रचण्डको मन छोला त ?
ऊर्जामन्त्री भएपछि वर्षमान पुन अनन्तले पनि फोन गरेका रहेछन् । त्यसवेला उनले स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएको र अब जनयुद्धकालीन मुद्दा किनारा लगाउने गृहकार्यमा खटिने बताएको हामीलाई जानकारी दिए ।
करिब १५ मिनेटमा यतिधेरै बातचित हुन भ्याए । हामीलाई दिइएको समय सकिँदै थियो । त्यसैले विदा माग्यौँ । हामी तीन युवा बसेको ठाउँबाट जुरुक्क उठ्यौँ । उनले उठेर हामी तीनैजनालाई धाप मारे र भने,‘हाम्रो भौतिक शरीर त यसैयसै जाने भो । तपाईं युवाहरूबाट देशको भविष्य देखेको छु ।’ यति भनिसक्दा नसक्दै उनका गहबाट बलिद्रधारा आँशु बगिसकेका थिए ।-सन्तोष भट्टराईले लेखेका यो खबर नयाँ पत्रिकाबाट लिइएको हो।
प्रकाशित मिति : २०७४ चैत ५,सोमबार